Va Mugabe Vanoti Pasi Rose Rinofanira Kubatsira Africa Kurwisa Zvirwere
Gunyana 20, 2011
Vakati sekupihwa kwakaita Africa rubatsiro rwekurwisa HIV/Aids, Africa inofanira kubatsirwawo kurwisa zvirwere zvisingatapuriranwe zvavanoti zvava kuuraya vazhinji munyika kupfuura chirwere cheshuramatongo cheAids nezvimwe zvirwere
Mutungamiriri wenyika President Robert Mugabe nezuro vakataura kumusangano we United Nations muNew York vakakurudzira pasi rose kuti ribatane mukubatsire Africa kurwisa zvirwere zvisingatapuriranwi zvakaita seBP, shuga, gomarara, kuoma mitezo nezvimwe.
VaMugabe vakati zviri pachena kuti Africa ichiri yakasaririra naizvozvo iri kunonoka kurapa kana kudzivirira zvirwere izvi.
Vakati sekupihwa kwakaita Africa rubatsiro rwekurwisa HIV/Aids, Africa inofanira kubatsirwawo kurwisa zvirwere zvisingatapuriranwe zvavanoti zvava kuuraya vazhinji munyika kupfuura chirwere cheshuramatongo cheAids nezvimwe zvirwere.
Mutungamiri wenyika akatiwo vanogadzira mushonga mu Africa vanofanirwa kubvumidzwa kugadzira mishonga isingadhuri kurapa nekudzivirira zvirwere izvi.
Dr Portia Manangazira ndivo mukuru we Epidemeology ne Disease Control mubazi rezvehutano. Vati vari kufara kuti musangano uyu wauya panguva yakanaka nekuti Zimbabwe iri kutambudzika nezvirwere izvi.